२०७७ असार १९ शुक्रबार ०७:१५:००
कुनै वेला साइकल बाध्यताले चलाइन्थ्यो । साइकललाई गरिबको साधन मानिन्थ्यो । पछिल्लो समय नेपालगन्जमा साइकलको परिचय बदलिएको छ । अहिले यो बाध्यताभन्दा बढी रहर र सोखको साधन बनेको छ।
सामान्य गुणस्तरका साइकल ग्रामीण भेगमा खपत हुन्छन् । घरानियाँदेखि मध्यमवर्गका परिवारले माउन्टेन बाइक खोज्छन् । साइकल अब बाध्यताको साधन रहेन, सोखका लागि चलाउने बढेका छन् ।
नयाँ–नयाँ मोडेल र महँगा कार चढ्नेको संख्या कम छैन, नेपालगन्जमा पनि । तर, तिनै कारधनी महँगा साइकलतिर पनि आकर्षित छन् । पहिले दुई हजार रुपैयाँको साइकल आमप्रयोगमा थियो । अहिले भने सामान्य परिवारले ६ हजारका साइकल चढ्छन् । हुनेखाने धनाढ्य सोख पूरा गर्न एक लाख २० हजार रुपैयाँसम्मका साइकलमा नजर लगाउँछन् । ‘महँगा कार बजारमा भित्रिरहँदा हाम्रो व्यवसायलाई कुनै असर परेको छैन,’ बिबी साइकल ब्रान्डका सञ्चालक मोहम्मद सरिफ बागवान भन्छन्।
उनका अनुसार नेपालगन्जमा माउन्टेन बाइकको माग धेरै छ । बच्चादेखि अधबैँसेसम्मको रोजाइमा छ, माउन्टेन बाइक । सामान्य गुणस्तरका साइकल ग्रामीण भेगमा खपत हुन्छन् । ‘उच्च घरानियाँदेखि मध्यमवर्गका परिवारले माउन्टेन बाइक खोज्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘साइकल अब बाध्यताको साधन रहेन, सोखका लागि चलाउने बढेका छन् ।’
सहरी जीवनशैलीमा शारीरिकभन्दा मानसिक थकान बढेको छ । शारीरिक व्यायामको विकल्प बनेको छ, साइकल । साइक्लिङ क्लबका अध्यक्ष गगनसिंह थापाका अनुसार शारीरिक व्यायामकै लागि नेपालगन्जका चिकित्सक, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजका अगुवा, सरकारी–गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी, पत्रकार, उद्योगी, व्यापारी सबैको रोजाइमा साइकल पर्न थालेको छ ।
नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका प्रबन्धनिर्देशक डा. सुरेशकुमार कनोडिया, भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाशबहादुर थापा, नेपालगन्जका मेयर डा. धबलशमशेर राणा, इन्सेक ५ नम्बर प्रदेशका संयोजक भोला महत, डा. मधु अर्याललगायत व्यक्तित्व सडकमा साइकल गुडाइरहेका भेटिन्छन् । ‘एकसाथ शरीरका सबै अंग चलायमान हुने भएकाले शारीरिक व्यायामको भरपर्दो साधन बनेको छ, साइकल,’ थापा भन्छन् ।
स्थानीय युवाले ०७५ सालमा ११ जनाको सहभागितामा साइक्लिङ क्लब स्थापना गरेका थिए । दुई वर्षभित्रै क्लबका सदस्य एक सयजना नाघेका छन् । क्लबका अध्यक्ष थापाका अनुसार लकडाउनका वेला करिब ५० जना साइक्लिस्ट थपिएका छन् । ‘मधुमेह, रक्तचाप, मुटु, दम, खुट्टा र घुँडा दुख्ने समस्या भएकाले साइकल चलाउन थालेका छन्,’ उनी भन्छन्।
क्लबका सचिव सतीश निरौलाका अनुसार सुरुमा सदस्य बनाउन ठूलै कसरत गर्नु परेको थियो । ‘साइक्लिङको महत्व बुझेपछि स्वतस्फूर्त रूपमा क्लबमा जोडिने क्रम बढेको छ,’ उनी भन्छन् ।
#सहर # साइकल # प्रिन्टसंस्करण
मुसहरले मनाए अन्तर्राष्ट्रिय भुइया दिवस
मजदुरी नपाउने डर : पक्की घरमा बस्न मानेनन् मुसहर